Googaa-Cigalee: Soo noqoshada C/waaxid Gamadiid, Meheradii la qarxiyey ee Westgate iyo Suldaankii noq-noqoshada badnaa. | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Googaa-Cigalee: Soo noqoshada C/waaxid Gamadiid, Meheradii la qarxiyey ee Westgate iyo Suldaankii...
Googaa-Cigalee: Soo noqoshada C/waaxid Gamadiid, Meheradii la qarxiyey ee Westgate iyo Suldaankii noq-noqoshada badnaa.
C/waaxid Gamadiid+Westgate+Suldaan M. Suldaan C/Qaadir =
Asxaabta sharafta leh iyo Saxaafadda madaxabanaanba, Ramadaan Kariim. Ma rabo in aan hadalka ku dheeraado, waxaanse jeclaa bal inaan akhristayaasha sharafta leh xasuusiyo saddex arrimood oo isu saan ekaaday hadana isku soo beegmay. Arrinta koowaad waa soo laabashada muwaadinka Itoobiyaanka ah ee ku eedaysnaa taageerada argagixisadda, Arrinka labaadna waa iyada oo dib loo furay meheradii uu ku eedaysnaa ee Westgate oo Nairobi ku taalay iyo Suldaan Maxamed C/Qaadir oo dabeecadihiisa si fiican looga yaqaano Somaliland.
Waa marka hore ee waxaan ogaa iyadoo C/waaxid loo haysto taageero uu u geystey kooxda Argagixisadda ah ee Al-shabaab markii ay qarxiyeen meheradda aan kor ku soo sheegay. Waxaan u kala saari-waayey laba mid uun:- In uu yahay nin aan aqoontiisa iyo fahankiisa nolosha midnaba ku filnayn iyo in caqligiisa iyo da’diisuba ku filan yihiin uuse yahay nin badheedhaya!
Hadaba hadii aan tan hore qaato, waa wax dhici kara marka aan u eego inta aan ka aqaano aqoontiisa maadiga ah oo iila muuqata nin an waxba ku hoos jirin laakiin uu jinni boqray iyo tiisa diineed oo aan iyadu faalo u baahnayn, maadaama uuba taageersan yahay urur argagixiso oo mabaadii’diisa la isla wada yaqaano; Taas macnaheeduna waa Inuu u baahnaa in iskaan (scanning) la mariyo kahor inta aan ummadda lagu sii dhex daynin. Hadaba, hadiiba aan tan ku adkaysto waxa laga yaabaa in ay isaga iyo dadka qaarkoodba ula muuqato mid meel-ka-dhac ah. Si kale hadaan u dhigona, kawarrama hadii ay da’da iyo aqoontuba ku filan yihiin, hase yeeshee uu badheedhayo. Su’aasha aan u socdo ee meesha ka soo baxaysaa waa, maxay noqon kartaa, maadaama aan Mudac iyo Maxaadh midna loo qaadanin oo aan la soo turxaan-bixinin shaqsiyaddan iyo hadiiba uu weli joogo isagoo oo aan marnaba meel fagaare ah kaga tanaasulin fikirkiisii hore?
Arrinta labaad ee ay tahay in la is dul taagona, waa cidda soo damiinatay iyo Maamulka Puntland aqoonta uu u leeyahay Suldaanka. Waa marka hore, waxaan bulshada xasuusin lahaa intii u dhaxaysay 1994 ilaa1997-dii inta jeer ee uu Suldaanku yimid madaxtooyada Somaliland iyo inta jeer ee uu kasii baxay wadada aadda madaarka Hargeysa! Bal waxaad intaas raacisaa nin dhaqanka soomaalida marka aad eegto qabiiladiisa mid aan ahayn u sheeganaya ”Suldaan” iyaga oo aan dooranin! Tusaale, Hadiiba aan tiisa u raaco, Suldaanka beesha Koonfurta Hargeysa, ma u noqon karaa suldaan, isla beesha degta Badhan, hadii aanay iyagu dooranin. Meel kaleba ha ka raadinin ee beesha dhexe ee Somaliland goorma iyo xagee bay ku dooratay Suldaan Maxamed C/qaadir?. Markaan taas eegno miyaanay isku barbar dhacaynin sheegashada C/waaxid iyo sheegashada Suldaan Maxamed?
Waxa kale oo iyana shaki weyni ku jiraa aqoonta ay bulshada Puntland u leedahay suldaanka. Sababta oo ah bulshada Somalilandba aqoon sidaas u sii durugsan uma laha dhaqanka iyo salaadiinta bulshada Puntland. Hadiiba ay sidaas tahayna, aaminaadda bulshada Puntland ee suldaanku waa mid calaamatu su’aal noqon karta. Nin baa laga hayey ”Maxaa layga soo heli, berriba waan lumiye”. Ka warrama hadii C/waaxid halkiisii ka bilaabo isaga oo aan is muujinaynin?.
Arrinta saddexaad ee igu kaliftay maqaaalkana, waa iyada oo isla todobaadkan dib loo furay isla meheradii kiiska u ahayd C/waaxid, taas oo iyadana uu muran ka taagan yahay dib-u-soo furideeda iyadoo weliba isla magacii wadata isla magaalada Nairobi. Markaan dhugtay saddexdaa arrimood oo aan aad looga fiirsanin soo laabashadooda, waxay ila noqotay uun qaladaadkii oo mar kale soo laa-laabtay, iyada oo bulshooyinka Nairobi iy Hargeysana ay fiirinayaan, waxa ay ku dambayn doonaan.
Guntii iyo gebagebadii, maxaa la gudboon shacbiga Somaliland iyo xukuumadooda oo ay hada iyaga kubaddu dhex taalo. Waxaan arkaynaa in nin aan hubsanini uu hooto afaysan u dhiibay nin aan saaxi ahayn, iyada oo isla xukuumaddana horeba loogu xamanayey inay sii deysey kuwa C/waaxid ka sii khatar badan, isla markaana ay hadaba fiirsanayso arrimo amni-xumo oo horteeda ka socda. Su’aal kale oo la is weydiin karaa waa; Yaa khatartu saamayn weyn ku yeelataa marka ay timaado, ma shacbiga mise xukuumadda. Bal hadda u fiirsada intii ku geeriyootay Alla yarxam iyo intii ku dhaawacantay qaraxyadii Hargeysa ka dhacay 29kii November 2008.
Calaa ayi xaal, waxay u muuqataa in shacbiga Somaliland iyo shacbiga Puntland-ba ay nafahooda isku deyayaan inay maareeyaan iyaga oo mindiyo ku dul socda, mudnaanta ay siinayaan qabyaaladda awgeed. Waxaana taa barbar socda dawlado-kusheegyo qayrul-masuul ah oo shacbiyadaasi talada u daba fadhiyaan wakhtigan xaadirka ah. Waxay u muuqataa inay waayuhu dib inoo xasuusin doonaan casharro aynu fasalkii koowaad ku soo qaadanay, ee bal aan ka war sugno wixii wacaalo ah ee ay waayuhu inagu soo celiyaan.
Previous articleMuuse Biixiyow Adoo Guri Quraarad Ah Degan Ha Shiidin Jaarka‏
Next articleXukuumadda Oo Mucaaradka Ugu Baaqday Ka Qaybgalka Wadahadal Guurtida Lala Galayo, Kana Digtay Shir Mucaaradku Qabsado